Ụdị Apple | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ụdị Apple
Ihe na ihe oriri nke Semerenko apụl, na-akụ ma na-elekọta
Mkpụrụ osisi na-esi ísì ụtọ nke ụdị Semerenko dị njikere maka owuwe ihe ubi na njedebe nke September. Ọtụtụ ndị na-enwe mmasị ịnụ ụtọ mkpụrụ osisi ahụ na-atọ ụtọ uto apple-wine, ọ bụ ezie na mmalite nke ụdị dịgasị iche iche na-anọgide na ihe omimi taa. L.P. Simirenko, onye na-azụlite Ukraine, buru ụzọ kọwaa ụdị dịgasị iche iche ma kpọọ aha ya mgbe nna ya gasịrị.
Ihe na ihe oriri nke apụl
Osisi Orchards nke mba anyị juru anya na iche iche. N'ogige nna nna m, ebe kachasị mkpa bụ ụdị Shtriepel, ndị agbata obi ya na-akpọ ya Streyfling ma ọ bụ oge mgbụsị akwụkwọ osisi apụl. N'oge mgbụsị akwụkwọ, nna nna ji obi ụtọ jere ozi ọma na mkpụrụ osisi na-acha odo odo. Apple Shrifel bụ obodo nke Baltic States.
Anyị na-eto osisi Orlik osisi n'ubi anyị
N'ihi mkpụrụ kachasị mma nke mkpụrụ osisi ahụ na àgwà njirimara nke apụl Orlik dị iche n'etiti ndị ibe ha. Ọzọkwa, ndị Ukraine, ndị Belarus na ndị Russia na-elekọta ubi, na mba ndị ebe a na-azụlite ụdị osisi ahụ, na-asọpụrụ ya maka mkpụrụ dị elu na precocity. Otu osisi tozuru etozu zuru ezu iji zụọ ezinụlọ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta ego ọzọ, ị nwere ike inweta di na nwunye.
Àgwà nke apụl iche swiit na cultivation agrotechnology
Ọtụtụ mgbe, ndị na-elekọta ubi na-eto eto dị iche iche nke osisi apụl n'ala ha. Ọtụtụ mgbe nhọrọ ahụ na-adaba na ụdị swiiti, nke na-enye mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ. Mkpụrụ mbụ na-egosi na osisi apụl na njedebe nke ọnwa July, ma, ọ bụrụ n'ezie, a ghaghị ile osisi ahụ anya. Esi mee ya na ihe ndị dịgasị iche iche, anyị ga-agwa ihe a.
Otu esi akụ na-eto osisi apụl nke Silver Hoof dị iche iche na ya ibé
E nwere ụdị osisi apụl dị iche iche: oyi, okpomọkụ, mgbụsị akwụkwọ, utoojoo, ụtọ. N'isiokwu a, anyị ga-ele anya n'otu n'ime ụdị okpomọkụ nke kachasị ewu ewu - Silver Hoof apple tree, àgwà nke ụdị dị iche iche, iwu maka ịkụ na ịchekwa osisi ahụ. Akụkọ nke apụl na-eto "Silver hoof" Ụdị osisi apụl "Silver hoof" bred na 1988 na nyocha Sverdlovsk site n'aka onye ọrụ ozuzu Kotov Leonid Andrianovich.
Ugbo nke osisi apple "Moscow kporo" n'ubi gi
Osisi apple "Moscow pear" a na-ewere ya dị ka otu n'ime ụdị osisi ndị kachasị ochie na-etolite na ụlọ ndị obodo na n'ubi ndị obodo, a na-etinye nkọwa a na nkọwa ya na ihe nzuzo nke nsị. Nke a dị iche iche pụtara site na ozuzu ozuzu na-adịghị toro maka nzube nzube. Ihe eji eme ihe: uru na ntughari nke ndi di iche iche.
Otutu columnar apụl "Vasyugan": njirimara, ihe ubi agrotechnics
Osisi Apple "Vasyugan" na-ezo aka na ụdị osisi apụl, nke na-aghọwanye ndị na-ewu ewu n'ihi na ọ dị mma, ọmụmụ, mmalite oge na ọdịdị dị iche iche. Na "Vasyugan", na mgbakwunye, nwekwara oke nkwụsi ike. Ka anyị lebakwuo anya na nke a.
Apple dị iche iche "Ligol": àgwà, uru na ọghọm
Mkpụrụ dị otú a dị ka apụl malitere iri ogologo oge gara aga. Ọbụna ndị nna nna anyị maara banyere uru bara uru nke mkpụrụ osisi ahụ. O nwere nnukwu vitamin na mineral ndị na-enyere ahụ aka merie ọrịa dịgasị iche ma debe ya na ọdịdị dị mma. Na ụdị ụdị apụl ndị e mepụtara taa.